မန်စီးတီး vs ချဲလ်ဆီး ၊ လန်ဒန်ဒါဘီ?? မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၂ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ - SPORTS MYANMAR
မန်စီးတီး vs ချဲလ်ဆီး ၊ လန်ဒန်ဒါဘီ?? မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၂ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
၁~မန်စီးတီး vs ချဲလ်ဆီး
မန်စီးတီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေနဲ့ အတူ လက်ရှိမှာ title race ကို ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ ခြေချော်လ်ိမ့်မယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံး မကစားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာတောင် နိုင်ပွဲတွေ ရယူနိုင်စွမ်း ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲက သက်သေပါပဲ။ ကြားရက်က လိဂ်ဖလားမှာ စပါးကို နိုင်ကာ ဖိုင်နယ် တက်သွားခဲ့ခြင်းဟာ ချဲလ်ဆီးကို အားတက်စေမှာပါ။ ချဲလ်ဆီးဟာ တူချယ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပြသထားခဲ့ပါတယ်။
စီးတီးဟာ ဘရစ်ခ်ျမှာတုန်းက ချဲလ်ဆီးကို ခြေစွမ်းပြကာ ၁-၀ နဲ့ နိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့တုန်းက မန်စီးတီးဟာ အမှတ်ပေးဖလား အတွက် အဓိက ကျော်ဖြတ်ရမယ့် အသင်းအဖြစ် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မှန်ကန်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီပွဲမှာလည်း မန်စီးတီး တို့ပဲ ထပ်ပြီး အနိုင်ရသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : မန်စီးတီး ၃-၁ ချဲလ်ဆီး
၂~အက်စတွန်ဗီလာ vs မန်ယူနိုက်တက်
ဗီလာဟာ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်မှာ အကောင်းဆုံး လှုပ်ရှားထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကော်တင်ညို ကိုသာမက အဲဗာတန်ရဲ့ လူကပ်ဒင်းကိုပါ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗီလာ အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ခေါ်ယူမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရန်းနစ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံတွေက အားရစရာ မရှိ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ချောင်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို တောက်လျှောက် ကစားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကစားပုံကို ပြသနိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲမှာ ဗီလာတို့ ကပ်ပြီး အသာရသွားမယ်လို့ မြင်နေပါတယ်။ ဗီလာ အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ယူနိုက်တက်ကို အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ရှုံးခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်မှာ ကံမကောင်းမှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ကစားရမှာ ဖြစ်သလို ပရိတ်သတ် အားကလည်း ရှိနေတာကြောင့် ဗီလာတို့ အနိုင်ရသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : အက်စတွန်ဗီလာ ၂-၁ မန်ယူနိုက်တက်
၃~လီဗာပူး vs ဘရန့်ဖို့ဒ်
မိုဆာလား နဲ့ မာနေး တို့ မရှိဘဲ လီဗာပူးတို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းသွားမလဲ ဆိုတာကတော့ စိတ်၀င်စားစရာပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဂျိုတာ ဖာမီနို တို့လို ကစားသမားတွေက အစားထိုးပေးနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး လာမည့် ပွဲစဉ်တစ်ချို့မှာ အိုရီဂီ ဂိုးတွေ သွင်းပေးခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲမှာတော့ လီဗာပူးရဲ့ တိုက်စစ် ကစားပုံဟာ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှု အားနည်းခဲ့ပါတယ်။
ဆောက်သမ်တန်ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဘရန့်ဖို့ဒ်ရဲ့ ခံစစ်ကစားပုံက ဆိုးရွားခဲ့ပြီး ခံစစ်မာကျောတဲ့ အသင်းဟာ ဒီလို ၄ ဂိုး ပေးလိုက်ရတာဟာ စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ ဘရန့်ဖို့ဒ် အနေနဲ့ ဒီပွဲပြီးရင် မန်ယူနိုက်တက် ဝုဖ် မန်စီးတီး တို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ခက်ခဲတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေ ဖြတ်သန်းသွားရမှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူး အနေနဲ့ အထိုင်ကျဖို့ အနည်းငယ် ယူရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ လုံလောက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် မာနေး နဲ့ ဆာလား တို့ မရှိပေမယ့် အနိုင်ရသွားမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် : လီဗာပူး ၂-၀ ဘရန့်ဖို့ဒ်
၄~တော့တင်ဟမ် vs အာဆင်နယ်
ချဲလ်ဆီးကို ရှုံးခဲ့တဲ့ လိဂ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်က အသင်းရဲ့ ကစားပုံ အတွက် ကွန်တီ အနေနဲ့ စိတ်ပျက်နေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ချဲလ်ဆီးဘက်ကို လုံလောက်စွာ မခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးကစားခြင်းလည်း ခံခဲ့ရတာပါ။ top4၀င်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဒီထက် တိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အတွက်ကတော့ ဆန်းပြားတဲ့ ရက်သတ္တပတ် တစ်ချို့ ပါပဲ။
သူတို့ဟာ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲမှာ ခြေစွမ်း တအားကောင်းခဲ့ပေမယ့် အဆိုပါပွဲကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက် အက်ဖ်အေဖလားမှာ ဖောရက်စ်ကို အသာစီး မကစားနိုင်ခဲ့ဘဲ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမှာတော့ ပွဲချိန် အများစုကို ၁၀ ယောက်ကျန် ကစားခဲ့ရပေမယ့် အဝေးကွင်းမှာ သရေရအောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အာဆင်နယ် အတွက် အရေးကြီး ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီး အရှိန်အဟုန်ကို ဆုံးရှုံးသွားလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနှစ်သင်းကြား ကွာဟမှု မရှိဘူးလို့ မြင်မိတာကြောင့် သရေရလဒ်ပဲ ရွေးချယ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : တော့တင်ဟမ် ၁-၁ အာဆင်နယ်
အခြား ပွဲစဉ်တွေအတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
နော့ဝှစ် ၁-၂ အဲဗာတန်
၀ုဖ် ၁-၀ ဆောက်သမ်တန်
နယူးကာဆယ် ၂-၁ ၀က်ဖို့ဒ်
၀က်ဟမ်း ၃-၁ လိဒ်